Iindaba -Ukukhusela ekusetyenzisweni nasekugcinweni kwealumum fused alumina
Amanyathelo okusetyenziswa kunye nokugcinwa alumina emhlophe fused
Uhlobo oluqhelekileyo lwe-corundum esirhabaxa kwishishini elirhabaxa limhlophe i-alumina edityanisiweyo. Yinto ebaluleke kakhulu ekusetyenzisweni kweshishini. Imozulu ibishushu ngoku kutsha nje. Sithatha njani amanyathelo okungangenwa kwamanzi kunye nokugcinwa kwemhlophei-alumina edityanisiweyo? Oku kulandelayo yingcaciso yesishwankathelo:
1. Umsebenzi ogqwesileyo: WI-hite fused alumina ingasetyenziselwa ipolishi kunye nokusila, intsimbi engenasici, intsimbi ephezulu kunye nezinye izinyithi; kwaye inokusetyenziselwa ukwenza isanti, ukugaya imveliso yevili, njl; Isetyenziswa ngokubanzi kwiiceramics ezahlukeneyo ezinjengokuphosa ngokuchanekileyo, i-iron refractory, i-chemical refractory, i-95 porcelain yombane, i-porcelain yokuhombisa kunye ne-porcelain kubomi bemihla ngemihla; kunye namashishini obuchwephesha aphezulu njengemveliso yezomkhosi kunye nezinto ze-elektroniki. Ubulukhuni be-alumina emhlophe ehlanganisiweyo iphakame kancinci kunaleyo ye-brown corundum. Inobunzima obuphantsi kancinci, ubunyulu obuphezulu, ukuzilola okuhle, amandla okusila amandla, ukuvelisa ubushushu obuphantsi, ukusebenza kakuhle, i-asidi kunye nokumelana ne-alkali, ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokuzinza okuhle kobushushu.
Ukunyanga okungangenwa ngamanzi: White i-alumina edityanisiweyo abrasives, kubandakanya abamhlophe i-alumina edityanisiweyo umgubo, mhlophe i-alumina edityanisiweyo isanti, njl., Zonke zenziwe kukunyibilikisa kobushushu obuphezulu, obunokuphakama okukhulu xa kuthelekiswa nezinye iimveliso ezirhabaxa. Ifuna ukungabi namanzi kunye nobungqina bokufuma xa isetyenziswa, ukugcinwa kwansuku zonke kunye nokugcinwa kwayo. Ukuze sikwazi ukuyisebenzisa ngcono.
3. Inokuphetshwa: iarhente ekhuselayo inika ukhuseleko olupheleleyo emhlophe i-alumina edityanisiweyo yeempawu ezohlukileyo, ezinje ngokungena kokufuma, amabala, ioyile, njl. I-White corundum yeyona ixhaphakileyo ukubonakala kwaye kunzima ukuyiphepha ziimpawu zamanzi. Phantsi kweemeko eziqhelekileyo, amabala amanzi anokukhutshwa ngaphakathi kwexesha elithile, kodwa amabala amanzi anokungabikho phantsi kweemeko zexesha elide ezimanzi kunye nemvula. Xa zigcinwa unyaka wonke, izinto ezinamachaphaza ziya kuba nefuthe kwi-corundum emhlophe, kwaye kungafunyanwa kuphela infarction yelitye le-stomata.